Ngunyaka ka-2016, futhi lo mbuzo: "Ingabe unayo iselula" - umsindo silly kunanini ngaphambili. Yebo kukhona ucingo - konke uhamba ibanga elide Smartphones, kodwa ngaphambi kokusebenzisa umshini ubengase ukukhuluma, abaningi odidayo. Ngaphambili, kwakuhlukile kancane. Abantu nazo udidekile ukuthi amafoni abangu ikhala, wamangala akukho kancane, kodwa uya ngaphandle isabelo ukudelela uncoma ngobuqotho.
Umlando kanye kwemvelo amafoni kanye yarkik kuhle okusheshayo. Bambalwa amathuluzi obuchwepheshe lakhula ngokushesha kangaka. kwemvelo umakhalekhukhwini bekulokhu okusheshayo nakakhulu. Nje kuzuba ezimbalwa zokugcina ezingu-30 eminyakeni engu-sewenze idivayisi zokuxhumana computer ephelele.
Sekuyisikhathi ukhumbule futhi ponostalgirovat. Kulesi sihloko masibuyele izenzakalo ezinkulu zomlando emhlabeni kwamaselula, cabangela lokhu inhlangano ngokuthi "ukuziphendukela omakhalekhukhwini", isithombe sokuqala kulezi amadivaysi futhi lokubheka isikhathi esizayo ...
Nokia Mobira Senator kudivayisi. 1982.
Uma sikhuluma imisuka, kubalulekile ukubheka ukuhlola lokuqala onjiniyela, owayevela eFinland. Ukuvela omakhalekhukhwini kanye amanethiwekhi eselula wathatha ivelaphi kusukela ngaleso simangaliso. Kwakungesinye amafoni lokuqala zisekelwa yinethiwekhi yakho yokuqala isizukulwane.
Mobira lephalamende, eqinisweni, kwakungelona yefoni, okuthiwa imoto amafoni isigaba. Idivayisi ukala-10 kg - ngempela kude iselula. Kodwa kwaba kuphela isitini sokuqala, kusuka lapho dudula ukuvela handsets.
Kudivayisi Motorola DynaTAC 8000X. 1984.
Esokuqala kwaba idivayisi compact emhlabeni eminyakeni engu-2 kamuva, lapho Motorola wenze intuthuko yayo yokuqala. Kwakuyisikhathi umkhiqizo iyingqayizivele ngempela, okuyinto ukutholakala zobunjiniyela. Inkinga yayiwukuthi kuphela ukufezwa kwezohwebo. Naphezu kweqiniso lokuthi igajethi kwaba elula kakhulu futhi icwecwe (isisindo 800 amagremu kanye nobude 25 cm), wehluleka. Isizathu ukuhluleka: alungise umonakalo omkhulu - 4000 zamadola, futhi ibhetri iphansi. Ocingweni yayingakwazi ukukhuluma isikhathi esingaphezu kwehora.
Nokia Cityman; Motorola MicroTAC. iminyaka 1987-1989.
Ngokumangalisayo, kodwa iminyaka engu-80 Onjiniyela wafuna wakhafulela ukuzimela futhi waqala umjaho crazy amamilimitha angu amagremu futhi. Esikhathini kusuka 1987 kuya ku-1989 kwafika amadivayisi amabili ayisisekelo.
Engineering emisha evela Nokia Kugcizelela ne Ubukhulu bayo: lezi amadivaysi compact (ngisho ne-antenna) wayengekho. Ucingo luye lwaba yetinsita ukukhanya kumabhayisikobho ahlukahlukene, abe uhlobo isithonjana yezokuxhumana mobile.
Eminyakeni emibili kamuva wangenela onjiniyela umdlalo kusuka Motorola, sinqume ukwenza idivayisi emfishane. Little MicroTac kuhlaziywe amagremu angu-300 kuphela, okuyinto ngokuqinisekile nomthelela impilo yebhethri of ifoni, lancipha ngesigamu sehora uma ziqhathaniswa isizukulwane esedlule.
Orbitel 901, Nokia 1011. 1992.
Ukuvela amafoni kuhlangene ngokungenakuhlukaniswa ukuthuthukiswa amanethiwekhi eselula. Ngo namuhla emuva ngo-1991-GSM-kunethiwekhi kuqala wethulwa Finland.
Ngemva kwesikhashana Kwaba khona futhi nesikhamo umshini okwazi ukusebenza naye. Uphawu lokuqala kwaba Orbitel 901, okuzokwenza Cishe ubheka ifoni yesimanje ekhaya. Telephone kuhlaziywe 2 kg. Yiqiniso, hhayi 10, kodwa namanje ngokwanele ukwenza ifoni ngokuphelele adluliselwe imoto wafela khona ngokuphepha.
izinguquko ezinkulu eza "Nokia". Ukuvela amafoni ngokuvamile kuhlangene ngokungenakuhlukaniswa inkampani, kodwa ngo-1992 inkampani seyenze inqubekelaphambili enkulu, ukuhlinzeka i phone emangalisayo compact ne-GSM ejwayelekile yesimanje.
"Bezantenny" design, imidlalo, amaringithoni
Hagenuk MT-2000, Nokia 2110. 1994.
Ukuvela amafoni, kanye nanoma yimuphi omunye uhlobo intuthuko futhi ononya ukushwabadela noma ubani ukulwela isikhundla salo, ngisho noma wethula into entsha, kusithinta ngempela emakethe. Kwaba okufanayo nge sha Hangenuk. Mhlawumbe igajethi kuphela manje seyaziwa wenkampani German - lokhu MT 2000, waba ifoni kuqala, okuyinto wanezela umdlalo ividiyo. Enkabeni yalo, umdlalo kwakunjani "Tetris". Esinye isici idivayisi kuyinto isakhiwo esisha esiyingqayizivele - antenna kufihliwe emzimbeni uqobo.
mashi okuqhubekayo izici multimedia kakade zaziwa ngaleso sikhathi, i-brand Nokia, yethulwa kuleli amafoni abo Ungalalela izingoma.
smartphone emhlabeni wokuqala
Simon Computer Siqu. 1994.
Bonke abasha e umzimba nomphefumulo, ngeke bakholwe, kodwa PDA wokuqala yasungulwa emuva eneminyaka engu-94-IBM. Ngokwezindinganiso zanamuhla, Ukucaciswa Simon Siqu Khuluma kubonakale engenangqondo, kodwa ngaleso sikhathi kwaba ibhomu (kodwa akufani njengoba Galaxy Note 7).
Elikhulu,-4.5 intshi, ezinombala ofanayo isibonisi resistive isinqumo encane 300 x 160 pixels. Smartphone kwadingeka iqoqo efanele izinhlelo ndawonye wamenza umhleli onekhono. Amakholi efoni ngaphezu, sikwazi ukuphendula ama-e-mail, ukwenza iimbalo zibe phezu wokubala, dala imicimbi yekhalenda nokunye.
Motorola StarTAC. 1996.
Evolution of the "Motorola" Amafoni Ihlobene ngokuseduze "clamshell", le bokubanga kolwandle kanye nokukhangisa.
Ngokwesibonelo, e-abamthandayo ukudala amafoni origanalnom design. Esinye sazo kwakungu-the StarTAC, okuyinto akakufanelekele nezakhi ezihlukene, ngisho wasebenza GSM ekuqaleni, kodwa kwaba ukushayelwa athandwa, ngenxa izici zangaphandle.
Ucingo safinyelela 19 amasentimitha ubude, iye yabhekwa icwecwe kakhulu futhi stylish.
Eyokuqala iwashi smart ne-GPS ngaphakathi omakhalekhukhwini
Samsung I-SPH-SP10, Benefon ESC. 1999.
Ngo-2015, sase wethulwa Apple Watch, uletha njengocingo esihlakaleni. It kuvela ukuthi lokhu isivele athuthukile iminyaka engaphezu kwengu-15 ngaphambili. Ucingo kwifomu isici amahora abulawa ngaso sethulwa phambi corporation Korean emuva ngo-1999.
Futhi emakethe kule nkathi bafika ifoni yokuqala olusekela GPS navigation service.
Sawubona, "Inyoka" futhi MP3
Nokia 3310, Samsung isiyaluyalu. 2000.
Ukuvela omakhalekhukhwini ekuqaleni ngekhulu xxi ongene esigabeni esisha futhi babe encike ngqo kwi onjani amakhono multimedia niyozenezelelwa umshini.
Akunakwenzeka ukuthi namuhla kukhona umuntu akazi mayelana "inyoka" (Snake original). Ayinzima, kodwa umlutha Ngeza kuleli zwe nge Nokia amafoni entsha, eyakhishwa ngo-2000.
Khona-ke waqala ukuba bathuthuke emhlabeni umculo, into eyayingalungile MP3-player, futhi "Samsung" unqume lokuteleka. Umlando waleli inkampani futhi ukuvela ifoni "Samsung" luye lwabonisa ukuthi ngokuphindaphindiwe ukuthi izinkampani ukuthi bangcono kunabanye Ungakopisha futhi ukuya ucwaningo kuhlulekile. Ngo-2000, unyaka ngaphambi iPod mzamo le baseKorea isinqumo ukuze ungeze amafoni abo ukulalela umculo in MP3 format. Kunengqondo brilliant, kodwa-ke ngeshwa, ifoni akazange wathola udumo kakhulu ngesikhathi esifanayo waba ingxenye enkulu e mshini intuthuko.
Entsha abaxhumanisi ngentambo
Nokia Khuluma 9500, Blackberry 6210. 2003-2004 iminyaka.
I imfuneko lokuqala okuguqula ifoni ibe amakhompyutha compact wabonakala isikhathi eside ngaphambi Nokia Khuluma ne Blackberry, kodwa lezi amamodeli ithonywe kakhulu kule nqubo. Bobabili amafoni esakazwa endaweni yenkampani lapho Isici esiyinhloko siwukuthi ephelele multi-function kwekhibhodi.
Coup. Smartphone wokuqala umxhwele
iPhone 2G. 2007.
Omunye izimpawu eyishumi wethulwa izwe edume uSteve Imisebenzi cishe 10 edlule. Umkhiqizo iyi California corporation kwakuwukunqoba yangempela, ngoba kwaba smartphone wokuqala onalesi capacitive "ukufaka ngokuthinta" -screens olungaqapha ukuthintwa. IPhone kuqala awuzange ifakwe imishini ezinye onamandla, kwaba ikhamera Okuqukethwe akuzwakali, kwaba eqolo lapho, kodwa kumangala nokuthi kwaba isici kokunquma.
Ukuvela ifoni Apple esikhathini esizayo yisendlalelo yonke umkhakha futhi irrevocably abathintekayo ukuthuthukiswa emakethe.
Naphezu kweqiniso lokuthi ngesikhathi ukukhululwa kwe-iPhone akuyona hleka nje ukuvilapha, lena umkhiqizo wabhubhisa izinkampani ezinkulu eziningana futhi kuyekelelwe ocebile "apula" ehhovisi.
HTC Dream. 2008.
Ukubonakala mastodon, njengabo iPhone, ayikwazanga zikwenze ube izimbangi efanayo sina. Ngo-2008, smartphone lokuqala eyehlayo ohlelweni lwakwa entsha lakhiwa umfelandawonye wezinkampani, eholwa ye-Google bunikezwe.
HTC Dream kwaba uhlobo ebucayini phakathi PDA zakudala (kwaba ifoni Kuyatholakala kwekhibhodi) kanye Smartphones esine zokuthinta. Kwakuwusuku Isinyathelo sokuqala ukuba madolonzima elibhekile ekuthuthukisweni kwamasevisi we izinhlelo mobile ethandwa kakhulu.
Lo mkhuba sezifile Windows Phone
LG Optimus 7. 2010.
Ngemva kokufunda iminyaka embalwa, Apple iye igeziwe ngokunethezeka, kuyilapho i-Android ngokushesha ikhula ngesivinini. Ngalesi sikhathi, phambi Microsoft uye Ekugcineni ngabona ukuthi sekuyisikhathi sokuthatha isinyathelo, futhi wangena emakethe nge-Windows Phone, ngokusobala okuyinto kwaba umkhiqizo ukwehluleka. Ukubambisana ne LG kwaba yinhlekelele zombili.
Tiled, esibonakalayo engeyinhle, ukuntuleka nokuxhaswa Onjiniyela third-party - konke lokhu kwenza Microsoft esimweni catch-up okuyinto hlala kuze kube yilolu suku.
iPhone 4s. 2011.
Kugcine brainchild of Steven uPawulu Imisebenzi, ngubani akakwazanga eme. Smartphone kusukela Apple 4s nge inombolo okuyingxenye ungowokuqala, lapho kwakuhlala intelligence kweqiniso yokufakelwa. Siri izwi umsizi ungowokuqala nge ukuziphatha kwabantu yangempela. "Njengoba siphila" yembathani iPhone yena okwazile sezulu, i-imeyli, thumela umlayezo nokuningi.
Ngemva konyaka, misa ekuphishekeleni, i-Google ezikhishwe Analogue yini kuzwakalisa izwi lako umsizi, futhi kamuva ngonyaka wahambisana nabo baseKorea kusukela Samsung, futhi wahlupheka fiasco emkhakheni software.
Samsung njengoba ungumholi omusha we emakethe mobile
Uchungechunge Samsung Galaxy S. iminyaka 2013-2016.
Samsung isibe elilandelayo umdlali omkhulu emakethe smartphone. BaseKorea abahlakazekile kakhulu, Galaxy ububanzi yabo unqobile udumo emhlabeni wonke, futhi manje bangabanikazi base ngobukhulu umsebenzisi.
Samsung ikopishwe isikhathi eside ke, yini ongayenza ukuze Apple, waze wagcina waqhubeka nendlela yakhe. Amafoni kusukela eKorea yazuza uhlamvu yayo siqu kanye nomklamo esiyingqayizivele, izici ezintsha. Inkampani usezuze eziningi ubuchwepheshe enelungelo lobunikazi, ukudala izimo best njengamanje emakethe. Namuhla, Samsung iyona esincintisana eliyingozi kakhulu Apple, ne Smartphones engcono esekelwe Android. Ukuvela Samsung - isibonelo olukhulu kanjani isibonelo angaphandle, ungakwazi ukwakha ibhizinisi lakho siqu siphumelele.
Babusi Xiaomi, Na, OnePlus, Meizu. 2014.
Lapho Smartphones ziye kwakuqala ukwanda ngokwanele futhi yaqala ukuthela imali eningi ukuze ujoyine emncintiswaneni Chinese. ikhophi Chinese zabantu baseKorea akuyona zaba zimbi nakakhulu ukuthi ayinayo Samsung uyaziqhenya ezinjalo, ngakho-ke waqala ukuthengisa zobuchwepheshe zabo ngesikhathi emangalisayo amanani okulahlwa, kanjalo futhi isishiya emakethe entsha ngokuphelele. Imakethe lapho kwakunokwenzeka ukuthenga "phezulu ekupheleni" smart phone for a measly $ 200.
Kulesi sikhathi esiyingozi ngenxa ompetha, kwakukhona izinkampani eziningi ukuthi ngokushesha wanyamalala radar, kodwa wakwazi ukuzitholela nocezu enzuzweni.
Wireless umsindo, ukubonisa frameless futhi ifoni yokuqala kusuka ku-Google
iPhone 7, LeEco, Xiaomi Mix, i-Google Pixel. 2016.
Naphezu kweqiniso lokuthi abasebenzisi abaningi okuye kwadingeka okwanele futhi zithandwa obusolisayo ukuba novelties Ngokuhamba kwalo nyaka, kuyafaneleka ukuthi kubaluleke kakhulu ukuze kube ngokuzayo. Ngentuthuko ka 2016 azikho izinguquko ezinkulu, kumane ukuvela amafoni, kodwa izinga okusezingeni eliphezulu kakhulu futhi edidayo.
Ngokwesibonelo, i-Apple ukhiphe smartphone eyindida kunazo zonke emlandweni. I Lake babekholelwa ukuthi babengeke ukuqeda jack embobeni futhi "ukufakelwa" bonke abasebenzisi okukhethwa engenantambo. LeEco, esekelwe amahemuhemu, wenza okufanayo.
BaseChina Xiaomi wanquma ukufeza amaphupho abalandeli babo wasungula isibonisi smartphone okuyinto oluthatha 91% ngaphambili iphaneli (yerekhodi ngokuphelele).
Emangele futhi i-Google, okuyinto kulo nyaka ekugcineni unqume ukukhipha smartphone ayo nge brand new umsizi izwi. Futhi lokhu kumane nje kuyisiqalo loko.
Konke lokhu "kuyisicefe" izindaba esikhathini esizayo nomthelela kwi umkhakha kanye nabasebenzisi futhi abathengi ezingaba angabuka lokungenani ukuthi abawulungiselelwa onjiniyela emhlabeni wonke kunalena sabasebenza kanzima uyoba umangale futhi, okuzokwenza ujike ukuvela amafoni, isithombe imiqondo okuyinto namuhla ajabulise ingqondo ...
I-Nokia 222: Izibuyekezo
Ifoni "Nokia 8800": ukubuyekeza imifanekiso, izici, izithombe. Izibuyekezo umsebenzisi
Kungani eliphezulu Hambayo Ucingo Uphatha kabi impilo
Indlela ukuhlanza ifoni yakho kusuka amagciwane uyivikele kusukela ekusetshenzisweni "ukutheleleka"?
Buyekeza: HTC One M8. Izinzuzo nezingozi nebubi of Cell Hambayo
Kanjani ukuze ufunde abhale asheshise? Kudingeka Isisusa!
Wezingane Hospital (Petersburg, emgwaqweni Komsomol, 6 ..): An aphoyintimenti ukubona udokotela, lunye, ukubuyekezwa
Izimbali kusukela izinwele. Zezinwele for iholidi
"Magnesium Orotate» (Magnesii orotas): inkomba, imfundo, analogs, ukubuyekezwa
Exotic brugmansiya: ukukhula ekhaya
Ivolumu ijezi: yini okufanele uyigqoke?
Ivan Alekseevich Bunin: ukuhlaziywa kwenkondlo ethi "The Last Bumblebee"
Isici sokucaphuna se-Chatsky. NJENGOBA uGriboedov, "Maye kuWe"
Gelatinized ushukela: incazelo nezakhiwo umkhiqizo engavamile